स्वास्थ्य बिमातर्फ आकर्षण- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
टीकापुर — स्वास्थ्य बिमामा स्थानीयको आकर्षण बढ्दै गएको छ । टीकापुर नगरपालिकामा मात्र करिब २० हजार परिवारको स्वास्थ्य बिमा भएको स्रोत व्यक्ति वासुदेव बजगाईंले बताए । उनका अनुसार सरकारको नीति पनि सबैलाई विमित गर्ने र टीकापुर अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पनि बढदै गएकाले बिमा गराउने बढदै गएका हुन् ।
बिमा गराउने परिवारको संख्या बढेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ । उपचार गर्न पैसा नलाग्ने भएपछि कतिपय विमित बिसन्चो नहुँदा पनि उपचारका लागि आउने गरेको डा. नवराज शर्माले बताए । उनले भने, ‘बिमा छ । बिमा रकम त्यसै किन जान दिने । सेवा लिनैपर्छ भन्ने कतिपयको मानसिकता छ ।’
स्वास्थ्य बिमा गराएर सेवा लिइरहेका शेरबहादुर चौधरीले स्वास्थ्य बिमा गराएर ढुक्क हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘कतिबेला बिरामी परिन्छ थाहा हुन्न । बिरामी पर्दा पैसा नहुन सक्छ । स्वास्थ्य बिमा गराए ढुक्क भइन्छ ।’ गत वर्ष पत्नी बिरामी पर्दा पैसा नभए पनि सजिलै उपचार भएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘श्रीमति टाउको दुख्ने समस्याले थला परिन् । टीकापुर अस्पतालले उपचारका लागि नेपालगन्ज रिफर गरिदियो । सीटी स्क्यान गर्नुपर्‍यो । बिमा नभएको भए म जस्तो गरिबले उपचार गराउने सक्थेन ।’
टीकापुर अस्पतालमा २०६३ देखि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सञ्चालन भएको सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुका वर्षमा १ नगरपालिका र ५ गाविसमा सञ्चालन भएको थियो । सरकारले अहिले प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पहिलो सेवा लिने केन्द्र मानेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
टीकापुर अस्पताललाई पहिलो सेवा लिने संस्था मानेर टीकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिका तथा जानकी र जोशीपुर गाउँपालिका तथा बर्दियाको राजापुर क्षेत्रका बासिन्दाले पनि स्वास्थ्य बिमा लिइरहेका छन् । टीकापुर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई उनीहरूले चाहेको नेपालगन्ज र काठमाडौंका अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउने गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमाका सदस्य परिवारले ३५ सय रुपैयाँ तिरे १ लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पाइने व्यवस्था छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरेको भए पनि स्वास्थ्य उपचारमा पूर्णतः निःशुल्क हुन नसक्दा सर्वसाधाणलाई स्वास्थ्य बिमाका सदस्य बनाएर सहुलियतमा सेवा दिन खोजिएको हो ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १३:०३
तरकारी किसान भन्छन्, ‘केही समस्या देखिए भिडियो च्याटमार्फत विज्ञहरूलाई समस्या देखाएर समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं’
श्रावण २९, २०७६ विप्लव महर्जन
सल्यान — साबिक कृषि विकास कार्यालय खारेज भएपछि जिल्लाका किसान लामो समय खेतीमा प्राविधिक समस्या भोग्न बाध्य भए । कृषि ज्ञान केन्द्र जिल्लामै राख्न माग गर्दै अगुवा किसान विभिन्न निकायमा पुगे । तर, सरकारी निकायबाट बेवास्ता भएपछि किसानले प्रविधिमार्फत कृषि परामर्श तथा प्राविधिक सल्लाह लिन थालेका छन् ।
पछिल्लो समय किसानले इन्टरनेट, मोबाइल फोन, एप्स र गुगलमार्फत व्यावसायिक खेतीबारे जानकारी लिन थालेपछि अधिकांश समस्या समाधान गर्न सजिलो भएको छ । सल्यानमा जिल्लास्तरीय कृषि कार्यालय छैन ।
स्थानीय तहमा समेत कृषि प्राविधिक पर्याप्त नभएपछि किसानले प्रविधिको प्रयोग गरी विज्ञको राय लिने गरेका हुन् । अहिले रुकुम पश्चिमको कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सल्यानमा कृषि विकासका काम भइरहेका छन् । शारदा नगरपालिका ६, बरलाका अगुवा किसान लोकबहादुर भण्डारीले काठमाडौंमा रहेका विज्ञसँग सम्पर्क गरी अधिकांश प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै आएको बताए । उनले कृषि विशेषज्ञ डा. केदार बुढाथोकीसँग अनलाइनमार्फत सम्पर्क गरी व्यवसायमा आएका समस्या समाधान गर्दै आइरहेको जानकारी दिए ।
‘तरकारीमा केही समस्या देखिए लाइभ भिडियोबाट रोग लागेको बिरुवा देखाइ डा. बुढाथोकीमार्फत सल्लाह लिने गरेको छु,’ उनले भने, ‘उहाँले १ वर्षदेखि मेरो बारीको सबै समस्या समाधान गरिदिनुभएको छ ।’ उनले विज्ञको सल्लाहका आधारमा खेती गर्दै जाँदा अधिकांश प्राविधिक समस्या समाधान गर्न आफैं सक्षम हुन थालेको जनाए । उनले १८ टनेल बनाएर खेती गरी वार्षिक १३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आइरहेका छन् ।
१० रोपनीमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आइरहेका बरलाकै भीमबहादुर बुढाथोकीले कृषि कार्यालय नहुँदा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न प्रविधिको सहारा लिनुपरेको बताए । उनी सुरुमा बारीमा केही समस्या देखिए समाधानका लागि ‘गुगल सर्च’ गर्छन् । त्यसबाट समाधान नभए कृषिका विज्ञलाई भिडियो च्याटमार्फत सम्पर्क गरी विभिन्न रोगकिराको प्रकोप नियन्त्रणबारे जानकारी लिने गरेको उनले बताए । ‘चिनजानका धेरै कृषि प्राविधिक मेरो फेसबुकमा साथी हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तरकारीमा केही समस्या देखिए उहाँहरूलाई भिडियो च्याटमार्फत समस्या देखाएर समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छु ।’
उनले तरकारीबाटै वार्षिक ८ लाखसम्म आम्दानी गरेका छन् । अर्का किसान हेमराज भण्डारीले आफ्नो मोबाइलमा कृषिसम्बन्धी विभिन्न ७ एप्स डाउनलोड गरेका छन् । बारीमा केही समस्या देखिए उनी सबै एप्समा अध्ययन गर्छन् । समाधान नभए यसअघि चिनजान भएका कृषि अधिकारी र प्राविधिलाई फोन र भिडियो कलमार्फत सम्पर्क गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १३:००